कुन समयमा यौन सम्पर्क राख्दा गर्भ बस्छ ? यस्तो छ जान्नुहोस्
अगस्ट 30, 2019 अगस्ट 30, 2019 साइन्स इन्फोटेक	8 Comments गर्भ, यौन सम्पर्क
गर्भ धारणका लागि कति पटक र कसरी सेक्स गर्ने भन्ने जानकारी भयो भने महिनौं कोसिस गर्नु पर्दैन । आफ्नो योजना अनुरूप सहजै गर्भधारण गर्न सकिन्छ । दम्पतीलाई यस्तो कुराको जानकारी नभएको स्थितिमा समस्या समेत सिर्जना हुनसक्छ । उसो भए गर्भधारणका लागि कुन बेला, कति पटक र कसरी सेक्स गर्ने ? कुन समयमा यौन सम्पर्क राख्दा गर्भ बस्छ ? जान्नुहोस् ।
डिम्बको आयु कति ?
महिनावारी नियमित छ भने डिम्ब निष्कासन सामान्यतः अर्को महिनावारी सुरु हुनुभन्दा १४ दिन पहिल्यै हुन्छ । त्यसैगरी अधिकांश महिलामा डिम्ब निष्कासन महिनावारीको मध्यविन्दु भन्दा ४ दिन पहिले वा पछि हुनसक्छ ।
जसरी बजारमा प्रेगनेन्सी टेस्ट किट बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध छ त्यसरी नै ओभुलेसन (डिम्ब निष्कासन) डिटेक्सन टेस्ट किट पनि सहजै पाइन्छ । यसबाट डिम्ब निष्कासन भएन भएको थाहा पाउन सकिन्छ ।
← ८५ प्रतिशत पानी पाइने लौका खानुका फाइदै फाइदाहरु
भगवान श्रीकृष्ण र द्रौपदीमा भएका समानताहरु →
सेप्टेम्बर 7, 2019 सेप्टेम्बर 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
8 thoughts on “कुन समयमा यौन सम्पर्क राख्दा गर्भ बस्छ ?”
Pingback:शास्त्र भन्छ, यी १० महिलासंग भुलेर पनि राख्नु हुँदैन शारीरिक सम्बन्ध
Pingback:वैंज्ञानिकले पत्ता लगाए यौन सम्पर्क गर्ने शुभ समय, जानी राखौ
Pingback:वैंज्ञानिकले पत्ता लगाए यौन सम्पर्क गर्ने उपयुक्त समय, जानी राखौ
Pingback:यी हुन् यौन सम्पर्क हुँदा युवतीले चाहने १० कुराहरु, जानी राखौ
Pingback:काउचोको प्रयोग गरेर यसरी बढाउन सकिन्छ सेक्स पावर, जानी राखौ